देश – Page 795 – YesKathmandu.com
एस काठमाडौं बुधबार २९, पुष २०७२
काठमाडौ २९ पुस । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अहिलेका नेपाल सरकारका ४ मन्त्री कारवाही परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै ५ हजार जरिवाना गरेको हो । ५ हजार जरिवानामा तिर्नेमा शान्तिमन्त्री…
काठमाडौ २९ पुस । सरकारले तराईका ११ जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रालयको मन्त्रिस्तरिया बैठकले तराईका ११ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले भक्तपुरका तोयल रायलाई मोरङ,काभ्रेका मदन भुजेललाई…
सुर्खेत २९ पुस । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादी क्रान्तिका लागि विचार, सोच र शैलीमा गुणात्मक फड्को अपरिहार्य भएको बताएका छन् । ६ नं. प्रदेश समितिको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै उनले…
सुर्खेत, २९ पुस । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ओली सरकारका काम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संघले बुधवार सुर्खेतमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी र जनताले…
काग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न–४० मन्त्रिमण्डल किन पुरयाइयो ?
काठमाडौं, २९ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक उपप्रधानमन्त्री सहित ४० जना मन्त्रीहरुको जम्बो टोली बनाएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्याएको आरोप लगाएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले व्यवस्थापिका संसदको सुशासन…
काठमाडौ २९ पुस । बैशाख १२ र २९ गतेबाट ध्वस्त भएका संरचना बनाउन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणको पहिलो पटक बसेको बैठकले भूकम्प पुननिर्माण सम्बन्धि तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक…